Macalinka kooxda Chelsea Antonio Conte ayaa sheegay in isaga iyo xaaskiisa ay hurdo la aan ka qaadeen kulanka Barcelona ay la ciyaarayaan caawa , | JAALENEWS
Macalinka kooxda Chelsea Antonio Conte ayaa sheegay in isaga iyo xaaskiisa ay hurdo la aan ka qaadeen kulanka Barcelona ay la ciyaarayaan caawa ,
Macalinka kooxda Chelsea Antonio Conte ayaa sheegay in isaga iyo xaaskiisa ay hurdo la aan ka qaadeen kulanka Barcelona ay la ciyaarayaan caawa ee Champions League inuu hurdadii ka guurtay habeeno dhowr ah.
Conte says he didn’t sleep much last night as he thought about challenge of facing Barca, and “the greatest player in the world”.
Conte Oo Ah Nin aad u dabeecad xun ayaa xiliga habeenki ah nalka ku dul daara xaaskiisa si u udajiyo shax ka dhan ah barceolana.
Conte ayaa uga digay ciyaartoydiisa inay qasab tahay inay diyaar u noqdaan inay dhibtoodaan haddii ay doonayaan inay kooxda reer Spain ku garacaan kulanka Champions League.
Antonio Conte ayaa yiri: “Aad ayay u adkeyd in la seexdo, in si fiican loo seexdo. Marka aad kulan ceynkaan oo kale ah ciyaareyso waa qasab inaad diyaargarowdo. Waa inaad u diyaargarowdo wax walba. Waa inaad u diyaargarowdo waxyaabaha waa weyn, laakiin sidoo kale xitaa waxyaabaha yaryar.
Conte says we have a plan for the game and it is important to choose players in good form, and then to try to do our best during the game. #CHEBAR
“Qorshe ayaa maskaxda ku heysanaa. Waxaan qabaa in waqtigaan gaarka ah inay muhim weyn tahay inaan soo xusho ciyaartoyda ku jirta qaab ciyaareedka ugu wanaagsan si aan isagu dayno ciyaarteena ugu fiican oo aan u badino.
“Waxaan qabaa inaan kulankaan ku bilaabaneyno kooxda yar taas waa hubaal sababtoo ah Barcelona iyada ayaa ugu cadcad inay u gudubto wareega xiga. Laakiin sababtaas darteed waa qasab inaan ku faraxsanaano howsha ina hortaala.
“Waa hubaal inay qasab tahay inaan ciyaarteena ugu fiican kala hortagno Barcelona haddii aan dooneyno inaan badino. Waan ku celcelinayaa marka jaraa’id la eego labada kulan waxaa ugu cadcad hal koox waana Barcelona.
“Waxaan qabaa inay shaqeysteen xuquuqda ay ku noqdeen kooxda ugu cadcad xilli ciyaareedkan waxaana ay ku muteysteen howshii ay qabanayeen mudadii sannadaha aheyd. Anaga waa inaan si aad ah u shaqeyno.”